यात्रा ! संघर्षको कथाः - Lekhapadhi अन्तर्वार्ता : Lekhapadhi lekhapadhi: global magazine of news and opinion
यात्रा ! संघर्षको कथाः
लेखक : लेखापढी १० मंसिर २०७७, बुधबार १२:३४ मा प्रकाशित
एउटा नेपाली गीत छ दिनेश अधिकारीको रचनामा तारादेवीले गाउनु भएको, ‘सोचे जस्तो हुन्न जीवन, सम्झे जस्तो हुन्न जीवन, जस्तो भोग्यो उस्तै हुन्छ, देखे जस्तो हुन्न जीवन !’ हुन पनि यो गीत हामी धेरैको जीवनसँग ठ्याकै मेल खान्छ । मेरो आजको यो लेख पनि यही सेरोफेरोमा अर्थात हाम्रो जीवनको महत्वाकांक्षा, सपना, भोगाई, सोचाई र देखाईको वरिपरि केन्द्रित छ ।
जीवनमा हरेक मानिसको सपना हुन्छ । अधिकांश मानिस आफूलाई सफल, सबल र सक्षम बनाउन चाहन्छन । तर पनि किन हुन्न हरेक मानिसको जीवन सोचे जस्तो ?
जीवनमा हरेक मानिसको सपना हुन्छ । अधिकांश मानिस आफूलाई सफल, सबल र सक्षम बनाउन चाहन्छन । तर पनि किन हुन्न हरेक मानिसको जीवन सोचे जस्तो ? किन सबै मानिस सफल हुन सक्दैनन् ? किन एउतै परिवेशमा हुर्केर बढ्ने र पढ्ने वा एउतै परिवारमा जन्मेका छोरा छोरीहरु कोही सफल हुन्छन भने कोही किन असफल हुन्छन ? असफल हुँदा कसैले आफ्नो भाग्यलाई दोष दिन्छन भने कसैले आफ्नो कर्मलाई दोष दिन्छन । के यो भाग्यको खेल हो वा कर्मको दोष हो ? वा, भगवानको आशिर्बादले त्यस्तो भएको हो ? कि नियतिले नै त्यस्तो बनाएको हो? मेरो मनमा मात्रै हैन हामी अधिकांशको मनमा यो कुरा खेलेको हुन सक्छ । तिनै सफल व्यक्तित्व र कुशल युवा नेतृत्व बसन्त मण्डेलसँग गरिएको कुराकानीको आधारमा तयार पारिएको मण्डेलको सफलताको कथा:
को हुन बसन्त मण्डेल ?
वसन्त मण्डेलको जन्म वि.सं. २०३९ साल असार २९ गते साबिकको लेकगाउँ गाविस वडा नम्बर ५ हाल छबिस पाथिभेरा गाउँपालिका वडा नम्बर -७ को ऐतिहासिक बझाङ जिल्लाको सु- प्रसिद्ध धार्मिक स्थल सुर्मा देबीको सुरुवात भएको पबित्र भुमि अर्थात पाथिभेरा हिमालको फेदीको वारि पट्टि रहेको रमणीय हिजो बाजे रगे मण्डेलले रोजाइमा परेको घट्टे सुन्दरपुर गाउँमा भएको हो । उहाँ एक निर्वाहमुखी खेती प्रणालीमा आश्रित निम्न मध्यम वर्गीय किसान परिवारमा जन्मेर हुर्कनुभएको हो ।
उहाँको न्वारनकाे नाम तथा गाउँमा सबैले चिन्ने नाम चाहिँ बाबजी मण्डेल भनेर चिन्दछन । उनी निकै संघर्षशिल व्यक्ती र परोपकारी मनका धनी यद्यपि हाल उहाँ निकै संघर्षका राजा बनेका छन् ।
उहाँका पिता जयधन मण्डेल र माता कन्कटी देबी मण्डेलका ४ सन्तान मध्ये जेठो सन्तान हुनुहुन्छ । उहाँको दुई भाई, एक बहिनी हुनुहुन्छ । उहाँको न्वारनकाे नाम तथा गाउँमा सबैले चिन्ने नाम चाहिँ बाबजी मण्डेल भनेर चिन्दछन । उनी निकै संघर्षशिल व्यक्ती र परोपकारी मनका धनी यद्यपि हाल उहाँ निकै संघर्षका राजा बनेका छन् । पछिल्लो समयमा मण्डेलको जन्म थलो गाउँमा निकै चर्चा परिचर्चा चलिरहेको छ । उहाँले बाल्यकालमा स्कुल जाने बाहेकको समयमा गाइबस्तुको गोठालो जाने र खेतीपातीमा बुबाआमालाई सघाउने गर्नुहुन्थ्यो । उहाँले शैक्षिक तहमा SLC सम्मको अध्ययन पुरा गरेका छन ।
भनिन्छ रात पछि दिन अवश्य आउछ ।
रोजगारीको सिलसिलामा बेङ्लोर पुग्नुभएका मण्डेल हालसम्म उहाँ भारतको ब्याङ्लाेर शहरमा नै बस्नुहुन्छ ।” जसलाइ भारतको बगैचा भन्ने सु-प्रशिद्र बिश्व प्रर्यटकहरुको रोजाईमा परेको रमणीय ठाउँ बेङ्लोर शहरमा आफ्नो कमाई बाट एक बर्ष अगाडी एउटा घर पनि किन्नुभएको छ ।
अमेरिका भन्दा रोजगारिको सिलसिलामा भारतको ब्याङ्लोर नै आफुलाई प्रिय र हावापानीको दृष्टिकोणले पनि म र मेरो परिवारलाई स्वास्थ्यकर भएको उहाँले बताउनु भयो ।
शुरुमा उहाँले धेरै कष्टकर कार्यहरू पनि गर्नुभएको थियो । पछि उहाँले एउटा फेसन सो प्राईभेट कम्पनीमा स्थायीको जस्तो सुबिधा सन्चय कोष कट्टी हुने र रिटाएर मेन्टमा पाउने सुबिधा भएको कम्पनीमा लामो समय काम गर्नु भएको थियोे । अहिले त्यस कम्पनीबाट सेवा निबिर्त भइसके पछि हाल उनले बेङ्लोर शहरमा आफ्नै लगानीमा २ वटा सम्पन्न कपडाका पसल चलाई राख्नुभएको छ । यता नेपाल आफ्नो जन्म भुमि बझाङ चैनपुर सहित अन्ने ठाउँमा शाखा सडक पुग्दा खेरी उहाँले एउटा “काका भतिजा” नाम गरेको महेन्द्रा बुलेरो जिप आफु र आफ्ना भतिजा शेर बहादुर मण्डेलले मिलेर चलाई राखेका थिए तर अहिले सो जिप आफ्ना भतिजा लाई नै सुम्पेका छन । उहाँलाई केहि बर्ष अगाडी अमेरिकाको चर्चित डिभि चिट्ठा पनि परेको थियोे । तर उहाँले भन्नुभयो अमेरिका भन्दा रोजगारिको सिलसिलामा भारतको ब्याङ्लोर नै आफुलाई प्रिय र हावापानीको दृष्टिकोणले पनि म र मेरो परिवारलाई स्वास्थ्यकर भएको उहाँले बताउनु भयो ।
वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा भारतको बैंलोरमा रहनु भएका मण्डेलका एक छोरी र एक छोरा गरी दुई सन्तान छन् । यीमध्ये छोरी बिन्दु मण्डेलको जन्म २०६३ साल पुस ६ गते भएको थियो । हाल उनी भारतको बहुचर्चित बिद्यालय Auxilium ICSC School Bangalore मा कक्षा ८ मा अध्ययन गर्छिन । छोरा द्रशिल मण्डेलको जन्म २०७० साल जेष्ठ २१ गते भएको हो । हाल उनि पनि ब्यङ्लोरकै बहु-चर्चित Narayanan techno school मा अहिले कक्षा ३ मा अध्ययन गर्दै छन् ।
संघर्षशिल व्यक्ती बसन्त मण्डेल झट्ट हेर्दा गहुँ गोरो वर्णका व्यक्ति हुन् । उचाइ औसत ५.५ फिट भएका यिनको शारीरिक व्यक्तित्व खाईलाग्दो किसिमको आकर्षक छ । मिजासिला स्वभाव भएका यिनी गम्भीर प्रकृतिका मान्छे देखिन्छन् । चिटिक्क छोटो कपालमा प्रायः सर्ट पेन्ट र भेस्ट नै लगाउने र यिनको स्वस्थ हृष्टपुष्ट शरीर भएकाले देख्नमा निक्कै सुन्दर देखिन्छन् ।
विचारमा प्रगतिशील संघर्षशिल व्यक्ती बसन्त मण्डेल आफ्ना हरेक क्षेत्रमा यसै विचार अनुसार काम गर्ने गर्दछन् । यिनी विकृति विसङ्गतिले जरा गाडेको गाउँ, समाज र राष्ट्रलाई प्रगतितर्फ उन्मुख गराउन तल्लीन रहन्छन् । सामाजिक कार्यमा संलग्न रहेर यिनी सदैव आफ्नो समाजमा हुने गरेका र भइरहेका प्रगतिशील कार्यक्रमहरूमा अग्रसर रहिरहेका देखिन्छन् ।
सफल बन्न मण्डेलको सूत्र :-
सफलतका लागि सपना देख्नुपर्छ । सकारात्मक सपना देख्ने मान्छेले हिम्मत गर्यो भने ऊ सफल अवश्य हुनेछ । इमानदार बन्नुस्, सफलता आफैं आउनेछ भन्दै उनी भन्छन्, ‘गलत तरिकाले प्राप्त सफलता क्षणिक हुन्छ ।
सफलतका लागि सपना देख्नुपर्छ । सकारात्मक सपना देख्ने मान्छेले हिम्मत गर्यो भने ऊ सफल अवश्य हुनेछ ।
कडा मेहनत र उपलब्धिका लागि निरन्तर प्रयास गर्ने असफल हुदै हुदैनन्’ । ‘सत्य बोल्नुस्, आफ्नो काम प्रति ईमान्दार बन्नुस्, सफलता आँफै आउनेछ’, मण्डेलले भने ।